विविध कार्यक्रमसहित नवौं नेपाली मेला सम्पन्न, एम्बासडर कप यसवर्ष पनि लमजुङ समाज युकेको हातमा – Tamu Dhee UK
Home » News » विविध कार्यक्रमसहित नवौं नेपाली मेला सम्पन्न, एम्बासडर कप यसवर्ष पनि लमजुङ समाज युकेको हातमा
क्याम्पटन पार्क । ‘हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गौरव’को नारासहित नवौं नेपाली मेला विविध कार्यक्रम गरी भव्य र उल्लासमय वातावरणमा सम्पन्न भएको छ ।
लन्डनस्थित क्याम्पटन पार्क, रेसकोर्षमा गत आइतबार २७ अगस्टका दिन सम्पन्न भएको नेपाली मेलाको एम्बासडर कप लमजुङ समाज युकेले हात पारेको छ । करिब १० हजारको उपस्थिति रहेको नेपाली मेलाको तमुधिं युकेका अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङ, प्रमुख अतिथि एवं नेपाली दूतावास लन्डनका राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी, विशेष अतिथि एनआरएनए आईसीसीका अध्यक्ष एवं तमुधिं युकेका संरक्षक डा. शेष घले, मेला संयोजक उपाध्यक्ष हित काजी गुरुङ र पूर्वअध्यक्षहरुले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।
करिब ४० वटा विभिन्न व्यापारिक स्टल राखिएको नेपाली मेलामा प्रमुख अतिथि डा. सुवेदीले मेलाले नेपाली कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँदै आयोजक तमुधिं युकेप्रति आभार व्यक्त गरे । त्यस्तै, विशेष अतिथि डा. शेष घलेले नेपाली मेलाको महिमा र गरिमाको प्रशंसा गर्दै एनआरएनए आईसीसीले हाल गरिरहेको विभिन्न प्रोजेक्टहरुको बारेमा जानकारी दिए । अध्यक्ष गुरुङले बेलायतवासीहरुको साझा कार्यक्रम नेपाली मेलामा उपस्थित भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिँदै प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिलगायत संघ, संस्था र उपस्थित महानुभावहरुलाई धन्यवाद दिए ।
नेपाली समुदाय र अन्य समुदायका करिब २०० जना विशिष्ट पाहुनाहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा विभिन्न १६ देशका महामहिम राजदूत, नेपाल ब्रिटेनका ७ जना विशेष पाहुना, २ जना एमपी, स्थानीय मेयर तथा काउन्सिलहरुको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा मेलाका संयोजक एवं तमुधिं युकेका उपाध्यक्ष हित काजी गुरुङले सबैलाई स्वागत गर्दै प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिलगायत सबै विशिष्ट पाहुनाहरु, दर्शक, मिडिया, शुभचिन्तकहरु, त्यसै गरी नेपाली मेलालाई प्रायोजन गर्ने व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायी र कार्यसमितिका सदस्यहरु, सहभागी विभिन्न नेपाली संघ, संस्था र सम्पूर्ण उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्विनले भिडियो सन्देश पठाएका थिए भने कार्यक्रममा सहभागी हुने लगभग निश्चित भएका लन्डनका मेयर सदिक खानले अन्तिम अवस्थामा कार्यक्रममा आउन नसक्ने जानकारी दिएका थिए ।
तमुधिं युकेका अध्यक्ष ज्ञाम गुरुङको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमलाई तमुधिं युकेका महासचिव कृष्ण गुरुङले सञ्चालन गरेका थिए भने झा“की र नृत्यको सूर्य गुरुङ, रोशनी गुरुङ, दिलमाया गुरुङ, सञ्जु घले, योगेश गुरुङ, युनिल गुरुङलगायतले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।
एम्बासडर कप लमजुङ समाज युकेको हातमा
नेपाली दूतावास लन्डनले नेपाली मेलामा उत्कृष्ट झा“की प्रस्तुत् गर्ने विभिन्न संघ, संस्थालाई सन् २०१० देखि एम्बासडर कपको प्रायोजन गर्दै आएको छ । गतवर्ष एम्बासडर कप हात पार्न सफल लमजुङ समाज युकेले यसवर्ष पनि सो कप हात पारेको हो ।
२६ वटा संघ, संस्थाले भाग लिएको झा“की तथा नृत्यमा लमजुङ समाज युकेले दुवै प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल ग¥यो भने घान्द्रुक समाज युकेले दोस्रो स्थान हासिल ग¥यो । सिक्लेस पार्चे समाज युकेले तेस्रो स्थान हासिल गर्‍यो । आ–आफ्नो जातीय, क्षेत्रीय र भेगीय पहिचान र संस्कृति झल्कने झा“की तथा नृत्य प्रस्तुत् गरिएको मेलाको मुख्य आकर्षणको रुपमा रहेको झा“कीले क्याम्पटन पार्कलाई नेपालमय बनाएको थियो ।
प्रथम भएका लमजुङ समाजलाई नेपाली राजदूत डा. सुवेदीले एम्बासडर कप प्रदान गरेका थिए भने अन्य विजयी संघ, संस्थाहरुलाई प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि र तमुधिं युकेका अध्यक्षले कप, नगद पुरस्कार र प्रमाणपत्र वितरण गरे । नृत्यतर्फ पनि लमजुङ समाज युके प्रथम, घान्द्रुक समाज युके दोस्रो र सिक्लेस पार्चे समाज युकेले तेस्रो स्थान हासिल गरेका थिए ।
सो अवसरमा झाँकीतर्फ प्रथम हुनेलाई एक हजार १ सय पाउन्ड, दोस्रोलाई ७ सय पाउन्ड र तेस्रो हुनेलाई ५ सय पाउन्डको चेक हस्तान्तरण गरिएको थियो । त्यस्तै, नृत्यतर्फको पुरस्कार पनि उनीहरुले नै पाएका थिए । एकेन्द्र गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको झा“की तथा नृत्य प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा दुत पुन ‘चिमखोले काइँला’, भगीरथ योगी, सुमाया राई र शेरबहादुर पुन रहेका थिए ।
सदाझैं यसवर्ष पनि झाँकी र नृत्यतर्फको विजेताहरुलाई विभिन्न प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा संघ, संस्थाहरुले पुरस्कार प्रायोजन गरेका थिए । झाँकीतर्फ कृष्ण तिमिल्सनाले प्रथम, सुदन गुरुङले दोस्रो र दीपक श्रेष्ठले तेस्रो नगद पुरस्कारको प्रायोजन गरेका थिए । त्यस्तै, नृत्यतर्फ ब्राईटसन ट्राभल्सले प्रथम, हर्क गुरुङले दोस्रो नगद पुरस्कारको प्रायोजन गरेका थिए भने योगकुमार फगामी, नमस्ते ट्राभल्स, हिराधन राई, ललित न्यौपाने, रिया मनीलगायतले विभिन्न पुरस्कारहरुको प्रायोजन गरेका थिए ।
नेपाली मेलाको अर्को आकर्षण भनेको राफल ड्र पनि थियो । झा“की तथा नृत्य सकिएपछि दर्शकहरुले लिएको टिकटको आधारमा राफल ड्र गरिएको थियो । राफल ड्रका प्रथम विजेतालाई ट्राभल्स कन्सुलका प्रोपाईटर बिराज भट्टले लन्डन÷काठमाडौं÷लन्डनको हवाई टिकट पुरस्कारस्वरुप प्रदान गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो विजेतालाई आइप्याड र तेस्रो विजेतालाई ल्यापटप उपहार प्रदान गरिएको थियो ।
क्याम्पटन पार्क नेपालमय
नेपाली भाषा, कला, संस्कृति, भेषभूषा र परम्परा बोकेको झाँकीको दृश्यले क्याम्पटनलाई नेपालमय बनाएको थियो । सन् २००९ सालदेखि सुरु भएको नेपाली मेला नवौं वर्षसम्म आइपुग्दा यसको गरिमा अझै बढ्दै गएको मेलाको विभिन्न दृश्यले आफंै बोलिरहेको स्पष्ट हुन्थ्यो । आप्mनो जातीय भेषभूषामा सजिएर आएका नेपालीहरुले मनोरञ्जन मात्र होइन, नयाँपुस्तालाई आप्mनो कला, संस्कृति र पहिचान हस्तान्तरण गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको धेरैको बुझाई थियो । नेपाली मेला सबै जाति, उमेर, क्षेत्र, वर्ग, धर्म, लिङ्ग, पेसामा आबद्ध सबै नेपालीको भेटघाट र मनोरञ्जनको थलो मेला बन्न सफल भयो ।
नेपालदेखि सात समुन्द्रपारि अवस्थित बेलायतमा रहेका नेपालीहरुले आप्mनो कला र संस्कृति जर्गेनाका लागि गरिएको नेपाली मेलामा गायिका ममता गुरुङ र गायक राजन गुरुङले विभिन्न गीतहरु प्रस्तुत् गरेर मनोरञ्जन प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रमलाई नेशा गुरुङले संयोजन गरेकी थिइन् ।
नेपाली मेलाका आयोजक तमुधिं युकेले सप्तरीका बाढीपीडितहरुलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । सप्तरीका बाढीपीडितहरुको सहयोगमा जुटिरहेका एनआरएनए आईसीसीमार्फत सो रकम नेपाली मेलाकै दिन अध्यक्ष डा. घलेलाई प्रदान गरिएको छ ।
नेपाली मेला विभिन्न झाँकी तथा नृत्य प्रस्तुत् गर्ने थलोमा मात्र सीमित रहेन । मेलामा नेपालको नाम उच्च राख्न सफल र समाजमा योगदान दिएका विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई पनि सम्मान गरियो । हालै सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका ब्रिटिस गोर्खा आर्मीमा कार्यरत क्या. गोविन्द राना, मिलन राई, निर्मल पुर्जा र सुवर्ण गुरुङलाई सम्मान गरिएको थियो भने आरोहण टिमको मेनेजर मेजर बुद्धि भण्डारीलाई पनि सम्मान गरियो ।
त्यस्तै, तेन्जिङ्ग हिलारी एभरेष्ट म्याराथुनमा भाग लिएर आएका तमु प्ये ल्हु संघ युकेका पूर्वअध्यक्ष सोम गुरुङ, बबिता गुरुङ, अञ्जु गुरुङ र सूर्य गुरुङलाई पनि सम्मान गरिएको थियो । नेपाली चलचित्रकी नायिका तथा मनको बाबरी चलचित्रकी निर्माता एन्सर्ज गुरुङ, गायक राजन गुरुङ, गायिका ममता गुरुङलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
झाँकी र नृत्यमा भाग लिएका सबै संघ, संस्थाहरुलाई सहभागिताका लागि धन्यवादसहित सम्मान गरिएको थियो भने ५ वटा संघ, संस्थालाई सान्त्वना पुरस्कार पनि व्यवस्था गरिएको थियो । झाँकी तथा नृत्यका निर्णायकहरुलाई समेत सम्मान गरिएको कार्यक्रममा विभिन्न प्रायोजक, कलाकार, उद्घोषकलगायतलाई पनि सम्मान गरिएको थियो ।
हुन त बेलायतमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली गैरआवासीय नेपाली नै हुन् । तर, एनआरएनए आईसीसी अध्यक्ष डा. शेष घलेको उपस्थितिले मेला एनआरएनए नेतृत्वमय बनेको थियो । आगामी ९ सेप्टेम्बरका दिन एनआरएनए युकेको सातौं अधिवेशन सम्पन्न हुन लागेको र सो अधिवेशनले नयाँ नेतृत्व पनि चयन गर्ने भएको हुँदा एनआरएनए युकेको सातौं कार्यसमितिका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो ।
तमुधिं युकेद्वारा कलाकारको स्वागत तथा सम्मान